Ihe mgbochi: 5 Ihe na-eme ka ị ghara inweta ohere zuru ezu na saịtị
Ihe na-esonụ bụ ndepụta nke mpaghara ise a na-eleghara anya mgbe niile n'ihi na onye nwe ya anaghị aghọta otú ha si arụ ọrụ ma ọ bụ esi edozi ha. Rịba ama na mgbanwe adịghị eweta nsonaazụ dị mma ma chọọ ndidi.
Jason Adler, Njikwa Ihe Nlekọta Ndị Ahịa nke Ụlọ ihe ntanetị Ọrụ Ntanetị, na-akọwa ebe a na-emekarị njehie SEO.
1. Ọ bụghị Ezi Afọ
Ugbu a, engines ọchụchọ , karịsịa Google, na-emeso ọdịnaya ọdịnaya dị oke mkpa ma debe ha algọridim iji jide n'aka na ha na-ejide ọdịnaya dị mma. Enweghi ogo ọdịnaya na mkpokọta ebe nrụọrụ weebụ bụ ihe na-egosi na ị nwere obere ebe nrụọrụ weebụ ma wedata okporo ụzọ - telehealth websites. E wezụga search engines ịchọpụta, mgbasa ozi mgbasa ozi nwekwara mmetụta na-enweghị mmetụta na ogo na okporo ụzọ weebụsaịtị .
Ọdịnaya nke ga - eme ka okporo ụzọ dịkwuo mma na - enye ndụmọdụ niile ederede ederede na - arụ ọrụ mgbe Panda, na Penguin, bipụtara na peeji nke ikikere dị elu, nke a na - eme nchọpụta nke ọma na nke enweghị mmasị.
2. Ịchọ maka Okwu Ngwá Agha Dị Elu
Ọ na-emetụtakarị ihe ndị metụtara engines ọchụchọ. Ọtụtụ ebe nrụọrụ weebụ na-asọ mpi ka ha dịrị na peeji mbụ nke SERP, nke nwere nanị nkwụsị iri. Nchọpụta ọchụchọ na-agbalị igosipụta saịtị ndị a tụkwasịrị obi n'elu ọnọdụ iri ndị a dị elu. Imirikiti nke saịtị ndị a maara banyere okwu ndị kachasị ewu ewu na ahịa..N'ihi asọmmpi a, ịnwa ịhazi maka otu isiokwu ndị a ma ama maka ebe nrụọrụ weebụ na-abịanụ bụ ihe siri ike.
Ebe ọ bụ na okwu ndị na-ewu ewu enweghị ajụjụ, ihe ọzọ bụ iji ogologo ụzọ. Jikọta mkpokọta okwu ogologo-mgbe ị na-eji ihe nchọgharị Google rụọ ọrụ ka ha nwere obere asọmpi. Usoro mgbasa ozi weebụ nwere ike ọ gaghị adị ka isiokwu ndị a ma ama ma ọ bụ ụzọ kachasị mma iji mee ka ntinye uche tụgharịa uche site na engines ọchụchọ.
3. Ugboro ala Weebụ
Google na-eji ngwa ngwa dị ka ọkwa dị mkpa n'ihi na ọ chọrọ iji mekwuo ahụmahụ onye ọrụ ya. Ọbụna nke ahụ, ndị ahịa na-eleba anya na ị ga-agagharị na ebe nrụọrụ weebụ na ibu ngwa ngwa. Ọ bụrụ na ọ dị arọ, ndị ọrụ ga-apụ na ibe. Ebe nrụọrụ ahụ ma ọ bụ peeji nke a nwere ike ịnweta okporo ụzọ ntinye akwụkwọ site na isi mmalite ma ọ gaghị enwe ike ijide ọsọ ọsọ nke 4-5 sekọnd, si otú ahụ na-eduga ndị ọbịa ịhapụ n'enweghị ihe nlele ọ bụla. Ọ bụrụ na oge nkwụnye ego na-abawanye na weebụsaịtị, mgbe ahụ, ebe nrụọrụ weebụ ga-emeziwanye nke na-eme ka okporo ụzọ na-arịwanye elu. Ọ na-emekarị ka ohere ịpụta n'elu oghere iri ahụ dị
4. Ihe Panda ma ọ bụ Penguin Kụrụ
Mgbanwe na algorithm search engine nwere ike imetụta otú otu ebe nrụọrụ weebụ si arụ ọrụ na SERP, ya mere, ọnụahịa nke okporo ụzọ natara. Ọ bụrụ na Panda ma ọ bụ Penguins hits na saịtị gị, mgbe ahụ, okporo ụzọ ahụmahụ nọgidere na-adaba kwa ụbọchị mkpa. Tulee akụkọ Google Analytics mgbe okporo ụzọ malitere ịdaba mgbe Google mere mmelite na algọrithm ha. Ọ bụrụ na enwere mmekọrịta, wee malite ime mgbanwe ụfọdụ iji weghachite okporo ụzọ weebụ.
Ọ bụrụ na ọ bụghị nke abụọ ahụ, ma eleghị anya na ọ ka bụ nwata, enwechaghị ihe dị n'ime ya, enweghị ihe àmà nke mgbasa ozi mgbasa ozi, ọ bụghị ebe ọzọ a na-esi enweta okporo ụzọ, ma ọ bụ mee otu ma ọ bụ karịa n'ime njehie SEO a kpọtụrụ aha.
5. Na-eme Siri Ike Na-adịghị Mma
E nwere ọtụtụ ndị ọkachamara SEO dị na weebụ taa. Ịhọrọ ụlọ ọrụ SEO na-ezighị ezi nwere ike ịzụta azụmahịa nke okporo ụzọ na ohere ndị ọzọ. Ekwenyela ihe niile na-egosi na ịntanetị. Chọpụta ma gosi onye ọ bụla ma ọ bụ otu ị na-aga maka SEO analysis.